I-Cozy Nest - Indawo Yokuphola Ngaselwandle - enebhafu enamanzi ashushu! - I-Airbnb
I-Cozy Nest - Indawo Yokuphola Ngaselwandle - enebhafu enamanzi ashushu!
I-Cozy Nest yindlu yokulala ethandekayo enamagumbi amathathu, i-cottage enobubele besilwanyana esinemibono emangalisayo yechibi elizolileyo, elingavukiyo. Kukho itubhu yabucala, yabantu aba-4 ejonge echibini. Ikhitshi ligcwele ngokupheleleyo kwaye lihlaziywe kakuhle, kwaye zonke iimpahla zintsha. I-Satellite TV kunye ne-DSL wifi ziya kukugcina uqhagamshelwe. Iindledlana zihamba kwindawo yokugcina indlela, kwaye iibhayisekile ezimbalwa ziyafumaneka ukuze ujonge amaphandle ajikelezileyo. I-Shipshewana yindlela ekhawulezayo yeemayile ezili-15 ukuqhuba.
I-Cozy Nest isandula ukulungiswa, ineendawo zokuhlala eziphangaleleyo ukuya kutsho kwiindwendwe ezisi-8 (ezi-2 zilala kwiisofa okanye umatrasi womoya esinokuwumisela). I-cottage ilungele izilwanyana. Sine-kayak yabantu ababini, isikhephe esibheqayo, kunye nephenyane elikhoyo ukuze sihlole eli chibi lihle lingavukiyo. Chitha usuku uhlola iShipshewana ekufutshane, okanye utsibe kwindlela erhafelwayo ukuze ubambe umdlalo wasekhaya eNotre Dame, okanye uphumle nje ngokuhlala ngasechibini.
I-HDTV ene-I-Roku, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Ezolile kwaye esecaleni
Sifumaneka ngemiyalezo yakwa-Airbnb, ngetekisi okanye nge-imeyile.